Ireo antsipiriany kely izay manalavitra anao amin'ny fiainana salama | Bezzia
Ireo pitsopitsony kely misakana anao tsy hanana fiainana salama
Susana Garcia | 04/05/2021 20:00 | fifanampiana, fahasalamana
Indraindray ny zavatra madinidinika dia misy vokany lehibe ary porofon'izany ny fampifangaroana fihetsika kely isan'andro dia mety hiteraka fiainana izay tsy karazan'olona tiantsika hiaina. Ny antsipiriany kely amin'ny fiainana isan'andro dia mandositra antsika fa mety ho tapa-kevitra rehefa hananana fomba fiaina tapa-kevitra na hanova azy tanteraka. Zava-dehibe ny hanasongadinana tsy ny fihetsika lehibe fotsiny fa ny fihetsiky ny kely indrindra koa.
Un tsipiriany kely miverimberina isan'andro dia lasa misy fiantraikany amintsika be dia be. Izany dia mandeha amin'ny zava-drehetra ary mety ho zavatra tsara ihany koa satria miaraka amin'ny fiovana kely dia afaka mahatratra tanjona lehibe isika. Ka andao hojerentsika hoe inona avy ireo andinindininy kely izay tsy avelanao anio hanana fiainana salama.
1 Tsy mikasa ny sakafonao ianao
2 Avelanao ho zavatra maro ny tenanao
3 Ny lanja very fotsiny no ifantohanao
4 Manao fanatanjahan-tena tsy tianao ianao
5 Avelao ny tenanao hahatsapa ny fiovana
Tsy mikasa ny sakafonao ianao
Mety ho hafahafa izany saingy raha tsy mikasa ny sakafontsika isika dia mora kokoa amintsika ny ho resin'ny fakam-panahy hihinana zavatra tsy mahasalama izay voahodina fatratra na misy tavy sy siramamy. Izany no mahatonga ny fandrindrana tsara afaka manampy anao betsaka amin'ny fanombohana fiainana salama. Azontsika atao ny manaram-po amin'ny fahafinaretana, fa amin'ny fotoana manokana ihany izy ireo. Ny sisa amin'ny fotoana dia tsy maintsy mifikitra amin'ny iray isika sakafo voalanjalanja sy mahasalama fisorohana ny fanampiana tsakitsaky na zavatra mety hahatonga ny sakafontsika tsy ho salama intsony.
Avelanao ho zavatra maro ny tenanao
Marina fa manana andro vitsivitsy foana isika rehefa maniry zavatra mamy na sarotra ny tsy misakafo na misotro toaka mandritra ny fety. Saingy ireo karazan-javatra ireo no mahatonga antsika farany tsy afaka mitondra fomba fiaina mahasalama araka izay tiantsika saika tsy tsapantsika akory, satria entin'ireny konsily kely ireny isika. Noho izany dia zava-dehibe ny fahalalana hatrany ny andro ahafahantsika mividy zavatra iray, nefa tsy mihoa-pampana. Tsy ny fahasalamantsika sy ny laharantsika ihany no hisaotra antsika, fa ny fahasalaman'ny vavonintsika koa. Ho hitanao fa tsy dia mavesatra loatra ny fandevonan-kanina sy ny fahatsapanao ho tsara sy mihatsara kokoa.
Ny lanja very fotsiny no ifantohanao
Tsy ity no fanafody manasitrana amin'ny fiainana salama, satria misy ny olona mety ho mavesatra ihany nefa salama ary ny hafa mahia. Ka eritrereto fa tsy ny fahaverezan'ny lanja vao miseho tsara kokoa, fa ny fikolokoloana ny vatanao mba hahatsapanao ho tsara kokoa. Rehefa mikarakara ny tenantsika isika manatsara ny fahatokisan-tenantsika ihany koa izahay, ary koa ny fahasalamantsika, ny hery fiarovana ary noho izany dia manatsara ny vatantsika iray manontolo isika ao anatin'ny fotoana fohy sy maharitra. Izy io dia fahitana manerantany momba ny fahasalamana manalavitra an'io hevitra lamaody io, izay mifantoka amin'ny refy ihany.
Manao fanatanjahan-tena tsy tianao ianao
Fahadisoana izany, satria amin'ny farany dia hijanona amin'ny fanatanjahan-tena ianao. Afaka mahita hetsika mifanaraka amin'ny azy ny tsirairay fomba fiaina sy ny tsirony. Ilaina izany mba haharetan'ny fotoana. Izany no antony tsy tokony hampiova ny asanao fotsiny sy hanandrana ny isan'ny manintona ny sainao, fa tokony hitady ireo izay tianao ianao mba hahatonga azy ireo ho ampahany amin'ny fiainanao.
Avelao ny tenanao hahatsapa ny fiovana
Ny fiovana dia tsy hitranga mandritra ny alina ary izany no mahatonga antsika indraindray sarotra manatanteraka azy. Zava-dehibe izany henoy ny vatantsika rehefa miova isika amin'ny fomba fiainantsika, satria holazainy amintsika fa mizotra tsara isika. Tsy tongatonga ho azy izany, fa ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina dia miaraka amin'ny fiainana salama ary izany no hahatsapantsika azy rehefa tsapantsika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Ireo pitsopitsony kely misakana anao tsy hanana fiainana salama
Ny maha-zava-dehibe ny fisintomana ara-pihetseham-po amin'ny mpivady